Habka uu al-Shabaab u askareeyo carruurta
12-ka bisha Febraayo ee sanadkaan, waxaa caalamka laga xusay Maalinta Caalamiga ee ka Hortagga Askareynta Carruurta si looga hortago askareynta carruurta.
Dalkeenna Soomaaliyeed waxaa si joogta ah ka dhacaan af-duubka carruurta da’ yarta kaasoo uu fuliyo ururka araxanka daran ee al-Shabaab si uu carruurtaas ugu khasbo inay ka qeyb galaan dagaalkiisa ku saleysan fikradaha gurracan ee xag-jirka ah. Ururku wuxuu sidoo kale u af-duubaa carruurtaas si ay u buuxiyaan tirada ciidammadiisa ee yaraatay ee sida xad-dhaafka ah loo laayay.
Bartamihii bishii Jannaayo ee sanadkaanna, ururka xag-jirka ah ee al-Shabaab wuxuu 60 carruur ah oo dugsiiley ah ka afduubay degmada Ceel-Garas ee gobalka Bakool si uu carruurtaas maskaxda uga beddelo uu dabeetana u adeegsado weerarrada ismiidaaminta ee uu u geysto ummadda Soomaaliyeed ee aan waxba galabsan.
Dabayaaqadii sanadka 2017-ka ayuu ururka al-Shabaab sare u qaaday af-duubka carruurta da’ iyadoo uu ku khasbay dadweynaha ku dhaqan goobaha uu weli ka arrimiyo inay dhiibaan carruurtooda si uu maskaxdooda u beddelo.
Wuxuu oday-dhaqameedyada iyo macallimiinta dugsiyada ee ku dhaqan miyiga ku khasbay inay dhiibaan carruur da’dooda dhan 8.
Wuxuu ururku dabeetana billaabayaa inuu carruurtaas maskaxda ka beddelo iyadoo ay aad u sahlan tahay in canug da’diisu tahay 8 jir la beddelo karo maskaxda oo laga buuxin karo fikrado gurracan oo xag-jir ah. Wuxuu ururku ugu dambeyntii carruurtaas u adeegsadaa weerarrada ismiidaaminta ee uu la beegsado dadweynaha Soomaaliyeed ee aan waxba galabsan.